Asaasaqa | Tababarka Garashada
Koorsooyinka iskudhafan (Zoom)
Koorsooyinka iskuxirka ah (helitaanka nolosha oo dhan)
Carruurnimada iyo qaangaarnimada
Talo ku socota xirfadlayaasha
Bilow qoritaanka oo riix 'Enter' si aad u raadiso
Sclerosi ku dhufo
Ururinta qodobbada la xiriira 'waallida', laga soo bilaabo qiimaynta illaa daaweynta
Ciyaarta chess-ka ma kahortagi kartaa waallida?
Miyuu xasuusta episodic iyo hadalka ku dhawaaqaan saadaalin karaa garashada?
Xusuusta episodic ee afka ah ee cudurrada neurodegenerative: aphasia horusocodka hore ee vs. Alzheimer
Qiimaynta neerfaha ee jileecsan: ma suura galbaa?
Dar darnaanta MCI iyo isbeddelka cudurka 'Alzheimer' ee waallida
Imtixaan ka qaadista cudurka 'MCI' illaa 'Alzheimer' ee waallida: baaritaanno noocee ah ayaa saadaalinno?
Awoodda waditaanka ee 3 nooc oo waallida: faa iidada qiimeynta neerfaha
Khalad-la’aan iyo tijaabin iyo qalad barashada: isbarbar dhig udhaxeeya labada qaab ee dadka qaba MCI amnesic
TABABBARKA WADASHAQADA EE MCI: 3 QAABOOYINKA KOOBKA LOOGU TALAGALAY
Jahawareer: Sababaha halista iyo waxyaabaha kahortagga
Copyright Xuquuqda Dhamaan © 2020
Boggan wuxuu adeegsadaa cookies si uu kuugu siiyo khibrad dheraad. Haddii aad xirto bayaankaan, waxaad ogolaanaysaa isticmaalka cookies. Waxaad dib u eegi kartaa macluumaadka goor dambe adoo raacaya isku xirnaanta Nidaamka Kukiyada ee ku yaal barta menu.aqbalaan Nidaamka cookie
Had iyo jeer karti leh
AQBAL OO AAD badbaadi